Ireo lalao dimy tokony hananantsika ao amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Luis Gomez | | Games
Na dia Linux aza dia tsy sehatra natao ho an'ny filalaovana ara-tantara, lohateny lehibe amin'ny karazana rehetra no tonga tany aminy ary ambonin'izany rehetra izany dia nisy ny fiovam-po lehibe nahafahan'ny vondron'olona nankafy fialamboly nandritra ny ora maro. Ny fironana amin'ny famoronana lalao manokana ho an'ny rafitra Windows sy Mac OS X dia miova ankehitriny ary tsy maintsy ampanaovintsika amin'ny ampahany betsaka amin'ny Steam sy ny filokana matanjaka nataony tamin'ny Steam OS.
Ao amin'ny torolàlana izay asehonay anao eto ambany dia manolotra anao izahay ireo lalao dimy tokony hananantsika ao amin'ny Ubuntu.
1 Mpitifitra: Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
2 Paikady mifototra: Hedgewars
5 Maka tahaka an-tsary: ​​DosBox
Mpitifitra: Fampihorohoroana an-tanàn-dehibe
Urban Terror dia lohatenin'ny fitifirana multiplayer maimaim-poana novolavolain'i Fasika mangatsiaka, izay misy motera mifanaraka amin'ny Quake III Arena malaza nefa tsy miankina amin'izany. Ny mpamorona azy dia mamaritra azy a shooter taktika aiza ny realisme dia tsy mifanipaka amin'ny fialamboly. Vokatr'izany dia mahazo lohanteny tsy manam-paharoa, mahafinaritra ary mampiankin-doha ianao izay hahatonga anao hifandray amin'ny namanao.
Tsy misy ny taranaka farany, ny sary mihoatra ny fanarahana ary miantoka ny filalaovana ekipa optimum amin'ny ekipa ambany angovo, saingy manana ireto manaraka ireto farafaharatsiny:
Karatra sary: ​​8 MB misy haingam-pandeha 3D sy tohana OpenGL feno.
Processium Pentium MMX amin'ny 233 MHz na Pentium II amin'ny 266 MHz na AMD K6-2 amin'ny 350 MHz.
Fahatsiarovana: RAM 64 MB, solosaina mifanentana 100% miaraka amin'ny Windows XP na avo kokoa.
Kitendry sy totozy mifanentana 100% an'ny Microsoft, fifaliana (tsy voatery)
Tsy mila fisoratana anarana, misy ny lohateny ho an'ny sehatra hafa toy ny Windows na Macintosh ary hizaha toetra azy dia mila misintona, mametraka ary milalao azy fotsiny ianao. Ao anatiny dia hanana ireto lalao manaraka ireto ianao:
Makà saina: Ny tanjona dia ny hisambotra ny sainan'ny ekipa mpanohitra ary hitondra azy any an-trano.
Ekipa Survivor: Esory ny mpilalao amin'ny ekipa mpanohitra mandra-pahatapitry ny iray sisa velona amin'ny ekipanao na lany ny fotoana, amin'izay hamatotra ny lalao. Ny fihodinana dia ampiasaina isaky ny ekipa ary izay mandresy indrindra amin'ny faran'ny lalao dia mandresy.
Team Deatmatch: Esory ireo mpilalao ao amin'ny ekipa mpanohitra. Tsy mitovy amin'ny maody Team Survivor izy io fa amin'ity fomba ity dia teraka indray ny mpilalao. Ny ekipa nanala ny ankamaroan'ny mpanohitra dia handresy rehefa tapitra ny fotoana.
Paompy Mode: Mitovy amin'ny Team Survivor fa miaraka amin'ny tsy fitovizan'ny ekipa iray hamela baomba amin'ny tobin'ny fahavalo ary ny ekipa iray hafa dia tokony hisorohana izany tsy hitranga.
Araho ny mpitarika: Mitovy amin'ny Team Survivor izany. Izany dia midika fa ny mpitarika dia tsy maintsy mikasika ny sainam-pahavalo izay eo amin'ny toerana tsy ampoizina, antony tsy maintsy hiarovana azy amin'ny fahavalo ny sisa amin'ny fitaovana. Mazava ho azy, ny mpitarika dia manomboka amin'ny fiarovan-doha sy fiarovan-doha Kevlar, avy eo mihodina amin'ny mpikambana hafa.
Manohitra rehetra: Amin'ity kinova ity dia tsy lalaovina amin'ny ekipa izy io, fa fomba iray manokana izay tsy maintsy hamonoana ireo mpilalao hafa rehetra. Mandresy ilay mpilalao namono ny ankamaroan'ny mpanohitra.
Sambory ary tazomy: Izy io dia maody lalao izay misy ekipa roa tsy maintsy mandray ny isan'ny sainam-pirenena be indrindra zaraina manerana ny sarintany. Raha eken'ny ekipa ny saina rehetra dia isa 5 no isa ho azy ireo, miaraka amin'ny ekipa manana isa ambony indrindra amin'ny faran'ny lalao.
Paikady mifototra: Hedgewars
Hedgewars Lalao paikady ifotony mifototra amin'ny angano Worms angano fa stedd hedgehogs fa tsy kankana. Ny lalao dia misy ny fanesorana ireo hedgehogs amin'ireo ekipa sisa mandray anjara amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana isan-karazany, maro amin'izy ireo tsy mahazatra ary manampy tena mahafinaritra amin'ireo lalao.
Ny sary amin'ny lalao dia karazany sarimiaina ary misy tranga azo ovaina isan-karazany izay manome fahasamihafana amin'ny lalao ary manana fomba maty tampoka izay tsy manitatra ny tsirairay amin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra. Araka ny voalazantsika dia mahafinaritra be ny milalao miaraka amin'ny namana sy fianakaviana satria isaky ny fihodinana dia mihelina ny fepetra ary mamela valiny tena hafa.
Ny lalao dia manana fahazoan-dàlana GPLv2 ary azo zahana amin'ny cross-platform ho an'ny fizarana Linux marobe (Ubuntu eo amin'izy ireo), Windows ary Mac OS.
FlightGear dia simulator sidina maimaimpoana ary ankehitriny iray amin'ireo safidy hafa manan-danja indrindra raha ny resaka simulator sidina ara-barotra. Misokatra sy azo itarina ny kaody ary, noho io, manana add-on marobe izay noforonin'ny antoko fahatelo izy
Izy io angamba no fandaharana tokana amin'ny karazany misy ny kaody tsy andoavany ary tsy mieritreritra ny hanafina ny fomba fiasan'ny ao anatiny, izay mahatonga azy io ho faritana be loatra. Na dia misy aza ireo mpilalao izay mihevitra fa tsy afaka mihoatra ny haavon'ny sary vokatra tsara indrindra, ny maodelin'ny fizotran'ny sidina sy ny zava-misy amin'ny fanaraha-maso dia mitovy amin'ny ambaratonga avo kokoa noho ireo simulator tsara indrindra. Izany dia satria ny FlightGear dia novolavolaina hatramin'ny voalohany niaraka tamin'ny mombamomba ny teknika sy siantifika avo. Izy io dia tohanan'ny OpenGL ary mitaky fitaovana fampandehanana haingana 3D.
Ny lalao dia azo alaina ho an'ny sehatra lehibe, Windows, Mac OS X ary Linux ary manana, anisan'ireo mampiavaka azy, ireto manaraka ireto:
Malalaka sy marina tahiry an-tsarimihetsika eran-tany.
Seranam-piaramanidina 20000 XNUMX, eo ho eo.
Un famolavolana terrain marina avy amin'izao tontolo izao mifototra amin'ny famoahana ny angona SRTM farany sy farany. Ny senario dia misy farihy, renirano, làlana, lalamby, tanàna, tanàna, tany, ary safidy hafa amin'ny jeografika.
Manana a maodely feno antsipirihany sy marina, miaraka amin'ny toerana marina an'ny masoandro, volana, kintana ary planeta amin'ny daty sy ora voatondro.
Izy io dia manana rafitry ny modelina fiaramanidina misokatra sy malefaka izay mamela ny hanitatra ny isan'ny fiaramanidina misy.
Ny fampihetsiketsehana ny zavamaneno ho an'ny cockpit dia milamina ary tena milamina. Ny fitondran-tena amin'ny fitaovana dia namboarina ho modely ary ny lesoka amin'ny rafitra maro dia averina averina am-pahamarinana.
Manana fanohanana marobe izy
Manana kaodim-pifamoivoizana tena izy.
Misy Safidy toetr'andro azo tanterahina Izy io dia ahitana hazavana roa avy amin'ny masoandro, rivotra, orana, zavona, setroka ary vokatra hafa amin'ny atmosfera.
pingus Is a tena malaza klone ny lalao Lemmings taloha. Voatahiry tanteraka ny mekanika ao aminy, ary ny tanjonay dia ny hitarika ireo penguin eo amin'ny sehatra mankamin'ny fivoahana. Mandalo dingana samihafa ny lalao ary hanana fahaiza-manao isan-karazany isika hanendrena ireo penguin hahafahana miala amin'ny sehatra misy loko manidina. Ny fanamby dia tsy ny fahavelomana ireo zavaboary kely ireo ihany, fa ny tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny ora sy ora maro voavonjy isika, izay mampitombo ny fahasarotan'ny lalao.
Rehefa mandeha ny lalao, dia ho lehibe kokoa ny fepetra takiana ary tsy maintsy manery ny lohantsika isika mba hahafahantsika mamaha ireo piozila samihafa izay misy ny dingana tsirairay. Torohevitra iray, misy fotoana ilana sorona penguin sasany ho famonjena ny ambiny.
Ny lalao dia manasongadina a fomba fanaovana sary maivana ary sary maro loko. Tsy misy feon-kira na feo azo heverina fa manatanteraka ilay asa fotsiny. Ny fanaraha-maso dia tsotra ary tena intuitive ary miasa amin'ny totozy daholo, ka afaka minitra vitsy dia ho azonao ny mekanika ny lalao ary hifantoka tanteraka ianao. Aza adino ny fotoana hanandramanao ity lalao Linux mahazatra ity.
Maka tahaka an-tsary: ​​DosBox
Tsy misy lalao mety, DosBox angamba ny tontolon'ny fakan-tahaka an-tsehatra x86 PC be mpampiasa indrindra any. Miaraka aminy dia afaka mihazakazaka saika ny lalao na rindrambaiko rehetra mifototra amin'ny tontolo DOS taloha ianao, Windows 3.11 ary Windows 95. Ny fahombiazany amin'ny ankapobeny, na dia tena tsara amin'ny herin'ny solosaina ankehitriny aza, tsy hahatratra ny haavon'ny marina mihitsy seranan-tsambo, ary tsy izany koa no tanjony. DosBox manana fanatsarana sary marobe ary mamela ny fanahafana kapila kapila, karatra feo, mpanara-maso lalao pad ary fitaovana maro hafa izay manatsara ny fiainana lalao lohateny taloha.
Avelantsika ny lalao marobe izay tsy ho hitanao mihitsy: simulation habakabaka, sehatra, fisehoan-javatra an-tsary ary sns sns. Amporisiho ary manome hevitra iza amin'ireo no ho nampidirinao ary nahoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Ireo lalao dimy tokony hananantsika ao amin'ny Ubuntu
Robena dia hoy izy:
satria amin'ny lohateny dia nametraka lalao 5 ianao, asio 5 ao amin'ilay lahatsoratra, sa tsy izany? Andao, ahoana ny The Battle for Wesnoth? Ity no lalao voalohany apetrako, kilasika ao anatin'ny Linux. Paikady sy nofinofy betsaka.
Valiny tamin'i Rubent
Wesnoth tena tsara.
Misaotra ny fampitandremana dia efa nahitsiko izany. Ny lalao tadiavinao dia tena tsara.
julio74 dia hoy izy:
luis taloha fantatro fa tsy ity kofehy ity no tokony hamoaka an'ity fa tsy hitako izay hatao hafa ary manana olana amin'ny kubuntu 15.10 aho ary izany dia ny tsy fanekeny ny fidiran'ny feo aloha, izaho manazava; Izaho dia manana tilikambo birao izay misy valiny aloha ho an'ny micro sy headphone, ary rehefa manomboka ny rafitra aho dia tsy mandre feo any, na dia amin'ny alàlan'ny mpandahateny mifandraika amin'ny vokatra avoakan'ilay tilikambo aza, raha toa ara-dalàna izany dia inona no ataonao? ny ataoko foana dia ny manamboatra azy ireo amin'ny alàlan'ny safidinao na amin'ny safidim-peo ao amin'ilay kisary eo akaikin'ny famantaranandro ary inona no mitranga isaky ny mamerina ny rafitra aho dia tsy maintsy manao io asa io ihany ary ny zavatra hafa dia raha mampifandray ny sasany amin'ny USB ao aho manafoana ahy ny feo avy amin'ny mpandahateny birao sy telefaona USB na dia fantany aza ilay fitaovana. Efa nijery forum hafa aho, nandefa mailaka tany amin'ny kde ary canonical aho dia nanandrana niresaka tamina olona tao amin'ny IRC fa tsy misy mamaly.
Mamaly an'i julio74
Freddy Agustin Carrasco Hernandez dia hoy izy:
Tsy fantatro fa misy kankana ho an'ny linux! misaotra an'i Ubunlog, nanao ny androko ianao! 🙂
Valiny tamin'i Freddy Agustín Carrasco Hernández
Alexander TorMar dia hoy izy:
Ny marina? Eny, ilay lahatsoratra, na dia misy aza lalao izay tsy dia misy dikany loatra amin'ny sary, tiako ny manohana azy ireo sy ny emulator sidina raha tsy mety izany ao amin'ny Ubuntu ary amin'ny Xubuntu dia mila fiankinan-doha manokana (Ankoatr'izay milanja mihoatra ny GTA) .. . Amin'ity dia tsy maintsy manohy manohana ny GNU / Linux isika, mbola tena mahantra amin'ny lalao sasany
Ary ao amin'ny trano fitahirizana ve izy ireo?
Orlando dia avy ny orana dia hoy izy:
ahoana ny fomba hamahako ny solosaiko no hadinoko ny teny miafiko ary tsy haiko ny manala azy manana 3 volana tsy misy solosaina aho
Mamaly an'i orlando llovera
Mila "manitsy" ny grub ianao mba hametahana ny fisarahana faka ary hanova ny teny miafinao
veloma lautaro dia hoy izy:
hafa ny lalao tsara indrindra izay pro
Valio veloma lautaro
Cami sy Mari dia hoy izy:
Inona koa ireo lalao kaway tena mahafatifaty
Valio amin'i Cami sy Mari
Ex mpilalao amin'ny windows dia hoy izy:
Valio ny mpilalao Ex amin'ny windows
Misaotra fa matahotra izy
Valio i thiago
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana HardInfo, fampahalalana feno an'ny PC amin'ny ubuntu